I-MUAMA Enence: Umhumushi wezilimi eziningi | TeraNews.net
umbhali Izindaba zikaTera Kushicilelwe ku 22.07.2019
Usahlela ukufunda olunye ulimi ukuze ukwazi ukuxhumana kalula kwelinye izwe. Noma faka umqondo ofanayo ezinganeni - ukhohlwe! Ikusasa selifikile. AmaJapan wethule insiza enhle ye-MUAMA Enence. Lona ungumhumushi wesikhathi sangempela.
AmaJapan abesebenzisa abahumushi abasheshayo iminyaka eyishumi. Ubuchwepheshe be-Smart buyadingeka phakathi konjiniyela nothisha. Kodwa-ke, umhlaba wonke, izwe le-Rising Sun belingashesha ukudlulisa ubuchwepheshe. Kepha isikhathi sesifikile.
Ngakho-ke, idivaysi iyazi izilimi ze-40 futhi isebenza ngesikhathi yangempela ngasikhathi sinye kwezindlela ezimbili. Lokho wukuthi, abantu be2 ngeke babone izinkinga ekuxhumaneni ngezilimi ezahlukahlukene. I-MUAMA Enence kulula ukuyisebenzisa, futhi ngokubukeka kufana nokuqoshwa kwezwi elidala. Umenzi wethembisa impilo yebhethri yomhumushi wosuku lwe-4. Isikhathi sokuphendula ekucutshungweni kwemisho yimizuzwana ye-1,5. Idivayisi iyakwazi ukuqopha imininingwane yomsindo.
Futhi okubaluleke, intengo. Umhumushi we-MUAMA Enence ku I-Aliexpress kubiza cishe amadola we-20 US. Abathandi bezikrini zokuthinta ze-LCD, kunamadivayisi afanele. Babiza okuthe xaxa - 50-60 $.
Umhumushi naye uyathakazelisa ngokusebenza okwakhelwe ngaphakathi. Ngaphezu kokubamba ngekhanda amagama angaphandle, le divayisi iyasiza ukuthuthukisa ukugqama ekubizeni amagama. Ngomshini onjalo, umfundisi akadingeki. Ngokuvamile, igajethi ayibizi, iyasebenza futhi izosiza izivakashi ezweni langaphandle njalo. Ungathenga umhumushi ngenani lentengo lapha: http://gbe.st/302eSvB
Liyini "ikhaya elihlakaniphile" - olidingayo nokuthi kungani
I-AirTag Apple - isilondolozi esincane sezinto
U-Elon Musk uthathe isinqumo sokuvuza izilwane ngezizathu